नेपालकै मोटो ब्यक्ती, श्रीमती छिन यति पातली सुन्दर, यस्तो छ यो जोडीको माया (भिडियो) – Wow Sansar
December 30, 2020 94
सामाजिक सञ्जालमा अहिले अनौठो लाग्ने जोडीहरु निकै भाइरल हुने गरेका छन् । फरक प्रकृतिका ब्यक्तिबीच भएका भएको विवाहलाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याएर भाइरल बनाउने ट्रेण्ड चलेको छ । अहिले फेरी सामाजिक सञ्जालमा एक जोडी भाइरल भएका छन् । पति निकै मोटा देखिन्छन् । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा नेपालकै सबैभन्दा मोटा भनेर उल्लेख गरिएको छ । उनको नाम हो कृष्णवहादु पन्त ।
जो चितवनको नारायणी नदिको आसपासमा भेटिएका थिए । उनको जोडी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । पन्तको श्रीमती निकै पातली छन् । यो जोडी देखिदा फरक देखिन्छन् । चितवनमा भेटिएका यि जोडीबीच निकै माया प्रेम छ । दुई जनाबीच कुनै समस्या छैन । तर कृष्णलाई देख्नेहरुले भने कहिले जिस्क्याउँछन् त्यतीबेला भने उनलाई निकै नराम्रो लाग्छ । उनको तौल एक सय १८ किलो छ । कृष्णले आफुजत्तिको मोटो नदेखेको बताए ।
उनी सानैमा भने यति मोटो थिएनन् । २०६२ साल देखी उनको शरिरको तौल बढ्न थाल्यो । जति प्रयास गरेपनि उनको तौल घट्दै नघटेको बताए । उनको विवाह २०५८ सालमा विवाह गरेका हुन् । देवघाटवाट कृष्णले विवाह गरेका हुन् । उनको विवाह हुँदा कृष्ण यस्तो माटो थिएनन् । एक्कासी शरिरको तौल बढ्दा उनीहरुलाई अचम्म लाग्यो । कृष्णले दमको औषधी खानेभएकाले त्यही औषधीको असर होला भन्ने लाग्यो तर कारण खासै कारण थाहा नभएको बताए । कृष्णको उमेर अहिले ३९ वर्षका भए । अरुका लागि अनौठो लागेपनि कृष्णलाई भने निकै गाह्रो हुन्छ ।
सामान्य काम गर्न, नुवाई धुवाई गर्न असहज हुने बताए । ससुराली पनि नजिकै छ । उनको खाना भने सामान्य नै छ त्यस्तो फरक केही छैन । नारायणी देवघाटमा भेटिएका उनीहरुको पारिवारीक जिवन भने सामान्य छ । शरिर ठूलो भए पनि उनले टेम्पो चलाउँछन् । मोटो भएपनि आफुले गर्न सक्ने काम गरेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारकिा लागि कतार गएका उनी उतावाट फर्कदा ह्वील चेयरमा आएका थिए ।
उनलाई उठ्न र अलिअलि हिड्न पनि परिवारका सदस्यले सघाउनु पर्ग्यो । उनी कतारमा गाडी चलाउँथे । त्यतीबेला नै उनलाई समस्या भयो । फोहर फाल्ने गाडी चलाउँथे त्यती बेला उनलाई फोहरको गन्धले त्यहीँ ढलेपछि उनलाई ४१ दिनपछि मात्र होस आएको थियो । तीन महिनाको अस्पताल बसाई पछि उनी नेपाल फर्केको बताउँछन् । त्यतीबेला अब जिवनमा केही गर्न सक्दिनहोला भन्ने लाग्थ्यो तर अहिले म सामान्य अवस्थामा आएको बताउँछन् ।
भिडियो हेर्न येहा किलिक गर्नुहोस
Prevखानेपानीका धारामा बरफ जमेर पानी आउन छाड्याे, ग्यास सिलिण्डरसमेत जम्न थाल्याे
Nextसुनिता हत्या प्रकरण : श्रीमान पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
प्रचण्डलाई फेरि ए’क्कासी के आइलाग्यो ? पत्नी सीता दाहाल अस्पतालमा भ’र्ना
अन्तिम पटक बाबाले छातीमा टाँसेर छोरी म जान्छु है भनेर जानुभयो तर फर्किनु भएन (भिडियो)
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6775)
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3901)
बागलुङमा बाघसंग दोस्ती गर्ने दिपेन थापा आए काठमाण्डौ, कारण यस्तो,बाघसंगको दोस्तीबारे यसो भन्छन (भिडियो सहित) (3359)
का’टिएको हात खुट्टामा जोडिदिए पछि… (1359)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1140)
भर्खरै भयो मुटु कापने दु,र्घटना आमा र छोराको घटनास्थलमै मृ,त्यु (1095)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1064)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1036)
एक जोडीले लिएका थिए होटलमा कोठा, लामो समयसम्म बाहिर निस्किएनन्, कोठामा जाँदा कर्मचारीहरु चकित (699)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (682)
रमेश र नन्दाको बा’रेमा यी युवती य’स्तो भन्दै मिडियामा… (हेर्नुस् भिडियो)